QURXINTA QURXINTA: SAWIR, SHARAXAAD IYO MAGACA UGU SARREEYA - SOOSAARKA DALAGGA
9 dhirta firfircoon ee loogu talagalay beertaada
Beerta, beerta si fiican loo hayo ayaa raalli ka ah kaliya mulkiilaha, laakiin sidoo kale martida. Markii hore, qurxinta weyn ee goobta waxay ahaayeen sariiraha ubaxa. Hadda ku jira munaasabada waxaa ka mid ah walxaha dhirta firileyda ah. Waxay kufilan yihiin dareenka yar ee daryeelka waxayna abuurayaan dareemid niyadjab iyo diyaar garow.
Waxaad ku beeran kartaa siiriyaal waqti kasta oo kugu habboon. Waxa ugu muhiimsan waa in jidka uusan aheyn mid kulul ama jiilaalku uusan imaan. Beeray ka hor xilliga qaboobaha si fiican u dulqaadan dhaxan iyo soo gelitaanka guga isla markiiba u rogi doonaa cagaaran.
Waxaan hore u sheegnay in dalagga firaaqada ah uusan u baahnayn daryeel gaar ah. Wixii ah, waxay noqon doontaa ku filan haddii ka dib barafka dhalaali doonaa waxaad nadiifin doontaa dhulka: ka saar laamihii qalalan, ka gooyay caleemaha buka buka iyo la qalajiyey, inflorescences qalajiyey iyo caleemo.
Dalaggu waxaa lagu gartaa qashin-saarid. Sidaa darteed, guga, fiiri goobta si taxadar leh iyo ka saar caleemaha xad-dhaaf ah. Dhaqtarku kuma dhaco cayayaanka. Cadaabada kaliya ee iyaga loogu talagalay waa aphids iyo shilin.
Si aad ula qabsato cabsida noocaas ah, waxaad isticmaali kartaa biyo fudud. Is dabajooga baadiyaha ay saameeyeen oo leh joodar xoog leh oo biyo ah oo tuubo ah. Haddii cayayaanka aan joogto ahayn, ku buufin xoollada saabuun iyo biyo.
Qurxinta qurxinta leh sawiro iyo sharraxaad
Dhirta ornamental waxay ka helaan magacooda erayga qurxinta (si ay u helaan muuqaal muuqaal qurxoon). Xaqiiqdii, caawimadoodana waxay u qurxiyaan sawirro beereed, goobo lagu ciyaaro, meelo magaalo iyo baadiyaha ah, guryo, iyo wixii la mid ah.
Tani waa warshad cagaaran oo ka mid ah qoyska firileyda. Waayeel. Waxay gaadheysaa ilaa 1.2 mitir. Wuxuu ka yimid Waqooyiga Afrika. Qaababka muuqaalkiisa:
Qaybta hoose ee laanta aan lahayn timo, sare - duufaan ama qallafsan.
Afargeecada kasta waxay ka kooban tahay labo ubax. Mid waa mid si wanaagsan loo horumariyo loona bisexual yahay, tan labaadna way ka yar tahay horumarka oo waxay leedahay basaas.
Celcelis ahaan, dhererka baalalka leh ubax yar oo mitir ah. Baaxadda dhan ee dhererka - ilaa 15 cm.
Goobo ayaa si toos ah u koraan, caleemuhu waa cidhiidhi, ilaa 60 sentimitir dheer.
Waxaa jira dhowr nooc oo warshadan ah.
Foxtail. Waxay leedahay inflorescences jilicsan oo jilicsan 40-100 sentimitir dheer. Kala duwanaanta midabka ayaa ah midab guduud ah ilaa casaan-bunni. Muddada ubaxu waxay dhacdaa dhammaadka xagaaga. Waxaa si fiican u bedelaya xilliga qaboobaha ee hoyga laga bilaabo caleemaha ama laamihiisa.
Ma taqaanaa? Qodobadii ugu horreeyay ee isticmaalka dhirta ornamental by man taariikhda dib ilaa qarnigii 6aad BC.
Bariga. Waxay si fiican u koraan carrada dhagaxa iyo dhiiqada. In height dhererka 80 sentimitir. Dharbaaxo culus, adadag, 4 ilaa 15 sentimitir dheer. Midabkiisu waa casaan ama guduud. Wuxuu diyaariyaa cimilada koonfurta.
Shaggy. Wuxuu jecelyahay dhagaxa dhagax iyo carro. Rikoodhada midabka dahabka, qaro weyn. Sidoo kale waxay jecel yihiin jawi diiran.
Iska hubi sagaal sagaashan oo caleemo oo qurux badan oo sariirta ubaxa ah.
Fudud. Warshad weyn oo leh caleemo waaweyn iyo boodhadh. Waxay kor ugu kacaysaa ilaa 1.2 mitir. Muddada ubax - laga bilaabo bilawga Juun ilaa dhammaadka Sebtembar. Wuxuu jecel yahay qorraxda dhalaalaya, laakiin waqti isku mid ah ayaa ku dhicin dhaxan daran. Iyadoo aan qabin carrada. Wuxuu ku kori karaa xuduudaha.
Gray. Sidoo kale warshad weyn oo ballaaran leh caleemaha berrito iyo baalalka isku midka ah. Wuxuu koraa labo mitir. Waxay ku duugmaysaa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar.
Nacas. Jacayl kale oo carrada adag ah iyo cimilada khafiifka kulul ee subtropics. Baqshiinku waa yar yahay, yar yar (ilaa 40 cm), casaan ama guduud. Qalalan laamo ayaa inta badan lagu qurxiyo walxaha bouquet.
Tan iyo dhirta ay ka timid wadamada kulul, waxay u baahan tahay in si joogto ah u helaan qoraxda. Beerta qaar ayaa geedka dhirta u soo jiiday sanadkiiba mar iyagoo koraya kalluun.
Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka ilaaliso siriyalka ka imanaya gustsada dabaysha qaboobaha leh iyo qaboobaha adag. Pennitetum waa aan qabin carrada, laakiin waxay dareemeysaa ugu raaxo leh ee qoyan, bacrimiyey iyo ciidda godan. Wuxuu u baahan yahay dareenka ugu dhow ee muddada koritaanka iyo horumarka firfircoon.
Waxaa lagu talinayaa in si joogto ah u wareegto hareeraha, si loo daboolo dhulka. Biyaha, haddii roobabku ku yaryihiin aagaga badanaa, bacrimin bille ah. Ha u oggolaan in qoyaanka ay ku ururaan duurka.
Sidaa daraadeed, meesha ugu wanaagsan ee beerto waxay la socotaa derbiyada dhismaha iyo meelaha hoose. Xilliga jiilaalka waxa fiican in laga saaro warshadda qolka. Haddii aysan suurtagal ahayn, ku dabool caleemaha ama laamihiisa. Cuntada ka soo baxda. Markaad abuurto abuur, muhiim maahan in lagu daboolo dhulka. Waa ku filan kaliya inaad ku cadaadiso ciidda. Goobta furan ee la beeray horraantii May, marka dhererka dhirta geedka waxay noqon doontaa 10-15 sentimitir. Geedo ayaa ugu wanaagsan in aad naftaada u jilciso, maadaama iibsigu badanaaba si liidato.
Ma taqaanaa? Horeba bartamihii qarnigii 19aad, dhirbaaxaha (pennisetum) waxa loo isticmaalay dhir diiran.
Mühlenbergia timo u eg
Timaha Myulenbergia-sida - warshad badan oo cows ah, oo ku dhashay qaaradda waqooyiga Ameerika. Xaafadeeda dabiiciga ah waxay ku koreysaa marxaladaha, wadooyinka. Bushka cawsku wuxuu koraa 50-100 sentimitir oo sarre oo isku mid ah dhexroorka.
Xilliga xagaaga, geedku wuu cagaar yahay. Iyadoo bilawga xilliga dayrta waxaa lagu rogrogaa midabyo naxaas ah iyo naxaas. Mühlenbergia waxay ku leedahay sumcaddeeda midabyo aan caadi ahayn. Inta lagu jiro xilliga ubax, waxay yihiin cirro-casaan, khafiif ah, xarrago leh. Iyada oo bilawga xilliga dayrta, baaluqyada ayaa la beddeley waxayna dhirta u rogaan baalal midab cad ama casaan ah. Waxay tilmaamaysaa dhirta kulaylka-jecel. Waxay u dulqaadataa dhaxan daran, gaar ahaan haddii heerkulku hoos u dhaco -18 digrii.
Bustaha xilliga qaboobaha ah ayaa sidoo kale burburin kara, marka ay jirto dheeri ah qoyaanka dhulka. Sababtan awgeed, xididdada dhirta ayaa ubaxi kara. Wuxuu jecel yahay qorrax iyo firifircooni, sidaas darteed waxa ay u muuqataa mid aad u wanaagsan oo ku yara ceelasha boodada ah.
Dhaqan ahaan ma aha mid lagu ciriiriyo goobaha boggyada ah. Ku habboon sida dusha sare. Ha ka cabsanin muddooyinka qalalan, laakiin haddii ay jiraan waraabin badan, waxay sii korri doontaa xitaa kabar badan. Iskawirid cayayaanka iyo cudurada.
Waxay ka soo baxdaa abuurka, laakiin geedkii geedaha qaangaarka ah waa la dhaqmaa. Beeridda beereed waxay sameeyaan Maarso, sida geedo dabiiciyan ah - in galaas. Dalag suurto gal ah ee ciidda furan, laga bilaabo May. Wixii daboolida koritaanka ugu wanaagsan ee leh filim. Uu u wareegay goobta saxda ah dhamaadka Maajo, horraantii Juun.
Nacas shaggy ah
Magaca Laatiin ah ee warshadda - shinnigga shinniiga. Warshad caan ah oo dhirta loo yaqaan 'Herbaceous', oo laga sii daayay gobolka Waqooyiga Afrika. Dhulkeena, waxaa loo isticmaalaa geedka sanadlaha ah.
Dhererka wuxuu koraa 30-60 sentimitir. Caleemaddiisu waa cidhiidhi iyo is qabad. Baakadaha ayaa badanaaba dahab ah oo midab leh. Muddada ubaxu waxay dhacdaa dhammaadka xagaaga.
Seeds waxaa lagu beeray dhulka dabayaaqadii February - horraantii Maarso iyaga oo dhulka ku riixaya laba milimaritir. Aagga lagu beeray waa in uu ku yaal meel diiran leh heerkul ah 22-25 digrii. Markaas caleemaha ugu horreeya waxay u muuqdaan saddex ilaa lix maalmood.
Ka dib labo ama saddex toddobaad ka dib markaad soo baxdo, waxaad ku deyn kartaa oo ku beddeli kartaa dheriyo yar. Iyadoo bilawga ah ee cimilada qaboobaha, waxaa ka wanaagsan inaad ku qariso dhirta qolka ama dabooli leh caleemo qallalan iyo laamood. Iyadoo caawinta peristoshtechinik qurxin ee xeebaha kaydka, terraces, abuuro dusha ama asalka asalka ah.
Dareeraha si fiican loogu habboon yahay: Yew Berry, kabuubka, boodhka, forsythia, dhirta, thuja galbeedka, juniper, hawthorn, lilac, rosehip, ryabolynistnyy ryabnichnistnyy, privet, barberry, acacia huruud, pyracanthus, cotoneaster.
Miscanthus (fan) waa caleemo ornamental ah oo ka timid qoyska badarka. Warshad aan qabyo ahayn oo sii kordhaya ee hoosta iyo cirfiidka. Aad u sarreeya. Dhirta qaarkood waxay gaareen dherer laba mitir. Leaves waa ballaaran, adag. Spikelet waxay u egtahay fanaani, hal jihe ah.
Ciraaqta qalqal-xumada waxaa ka mid ah 16 nooc. Mid kastaaba wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah.
Miisaan weyn oo weyn. Waxay u egtahay sida duufaan, maadaama ay gaadhayso ilaa saddex mitir. Waxay u eegtahay bangiga kaydka. Caleemaha dhirta waa adagtahay oo laalaaba dhinacyada sida laanta cagaaran. Wakhtiga ubaxu wuxuu dhacaa dhammaadka xagaaga, bilowga xilliga dayrta. Haddii cimiladu tahay qabow iyo xagaaga waa mid aad u gaaban, ka dibna ubax ma dhici karto.
Shiineys. Warshad kale oo dheer. Waddanku waa Shiinaha iyo Japan, sidaa daraadeed shiineyska Shiinaha wuxuu jecel yahay jawi diiran, qoyan. Muuqaalka muuqaalka geedkan waa sidan soo socota: bartamaha waxaa ku jira baatroolo dhererka dheer, iyo dhinacyada, qaybta hoose, caleemaha koraan. Maqaaradaha ayaa kora ilaa 30 sentimitir dhererka. Aagga cimilada ee cimilada, geedka ubaxyada xagaaga dambe, dayrta. Si fiican u qurxin aagga xeebta ee kaydka, xuduudaha cawska, meelaha beeraha.
Sugar Blossom. Xaafadeeda dabiiciga ah waxay ku koraan bangiyada wabiga ah, qoyaan qoyan. In height dhererka laba mitir. Inflorescences waa dhif iyo naadir. Wakhtiga ubaxu wuxuu dhacaa bisha July. Fikradaha qurxinta waxay jecel yihiin midab illaa dhammaadka xilliga dayrta.
Haddii aysan lagama maarmaan u ah geedaha si ay u koraan si xoog leh, ku beeraan dhulka qalalan. Waxay tilmaamaysaa dhirta kuleylka-jecel, sidaas darteed, waxay u dulqaadanayaan dhirifada daran si liidata. Marka bilawga hargabka, misgasus waa in la daboolaa.
Dhammaan noocyada qaldoofka ah waxaa lagu faafiyaa abuurka iyo xoortay. Aan qaboojin lahayn oo ha jecelnin wax badan marka la bedelo. Hase-yeeshee nidaamkan waa in la sameeyaa si wakhti ah, gaar ahaan haddii qaybta dhexe ee baadiyaha ay bilaabaan inay qalalaan. Ku xoortay geedo budo ah guga hore.
Warshad aan caadi ahayn, taas oo ah noocyo kali ah - ukunta dhirta oo kale. Inta badan, waxaa loo magacaabay sababtoo ah xaqiiqda ah in fiiqu uu leeyahay qaab ukun ah, oo wuxuu u eg yahay daboolka qorraxda fog.
Qummanka toosan wuxuu koraa illaa 95 sentimitir. Wuxuu ku koraa waddamada Mediterranean. Waxay ka dhacdaa Ukraine. Laga soo bilaabo halo of habitat waa cad in geedka u baahan yahay jawi khafiif ah. Jiilaalka barafku waa qaali.
Si ay u koraan tailtail on goobta, waa lagama maarmaan in la ururiyo abuurka dayrta. Waqtigaan, waxay si buuxda u bislaadaan oo qalalan. Goob-beereedka wuxuu bilaabmaa Abriil in lagu koriyo ama dheriyo yar yar. Laba toddobaad ka dib, waxaad ku beddeli kartaa meel diyaarsan ee beerta. Iyada oo ay timaado qorrax diiran (May bishii), waxaad abuuri kartaa abuurka ciidda furan. Waxa ugu wanaagsan in la isku daro abuurka oo ciid ah oo riixaya dhulka laba mitir oo mitir ah. Masaafada u dhaxaysa godadka - 10-15 sentimitir. Caleemaha waxay muuqdaan 10-12 maalmood kaddib markaad beerto.
Haretail - warshad aan qabin. Dareenka si isku mid ah ayuu u fiican yahay meelaha bannaan iyo dhererka balakoonka. Si fiican u dulqaadanayo xilliyada qalalan, haddii la siiyo biyo badan oo la bixiyo.
Geedo qurux badan oo ka mid ah qoyska firiley oo leh caleemo buluug ah. Barafku wuxuu u eg yahay hummock qaab qaab caadi ah. Caleemaha waa dhuuban, dheer, ok-qaabeeya. Inflorescences waa kuwo yaryar iyo dhuuban, ku hay muddo dheer, ilaa 150 sentimitir, stem.
Hag u ah meelaha leh qalalan, ciidda la gooyey. Xeebta shaagga iyo ciidda la bacrimiyo ayaa bilaabata inay si firfircoon u cagaaraan. Jeclaa dhulka ceyriinka ah. Haddii cimiladu tahay mid kulul iyo qoyan, waa wax xun.
Waxaa lagugula talinayaa inaad gasho guga. Marka ottsvetet geedka (July), baalalka ayaa u baahan in la gooyo, iyo sanadka soo socda ee guga si ay u gooyaa gebi ahaanba afkoda. Wuxuu u dulqaadanayaa garoomada si fiican, laakiin ka dib marka miraha daran uu lumiyo rafcaankiisa. Waxay kicisaa labada by abuur iyo by beerto baadiyaha. Geedo koraya waa in ay ku jiraan dheriyo. Waxaa fiican inaad kala qaybiso geedkii hore ee guga, sidaas darteed dayrta dhirta ayaa ku dhajin doonta meel cusub oo ay sii koraan.
Midabada buluuga ah
Falliga buluuga ah waa geedo qurxin aan caadi ahayn oo midabkiisu buluug yahay. Iyo sidoo kale hadhuudhka idaha, waxay leedahay qaabka boomka caadiga ah oo leh dherer ah 35-40 sentimitir. Si dhamaystiran u dhammaystirid naqshadeynta sawirka, lagu beeray cawska hooseeya. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo sariiraha ubaxa, balliyada, goobaha baarkinka.
Fisiyadu uma baahna daryeel gaar ah. Si loo sameeyo warshad aan caadi aheyn si uu ugu daboolo midabka buluuga ah, u kaydi meelo qorrax leh. Iyadoo la'aanta qorraxda, caleemuhu waxay helayaan midabka caadiga ah ee cagaaran.
Baro wax badan oo ku saabsan qarsoodiga ah ee fescue sii kordhaya abuur ah.
Ciidda waa la xiri karaa, laakiin mar kasta waa la furay. Waxuu ku jiraa bilaha Juun ilaa dhammaadka dayrta. Baqshiishadu waa khafiif, cawl-cagaaran jireed.
Haddii dhirta ay ku koraan goobtaada muddo seddex sano ah, waa waqtigii ay bilaabi lahayd beerashada. Laga soo bilaabo halkan, habka noocan oo kale ah waa in la qabtaa labadii sanaba mar. Tani waxay u muuqan doontaa muuqaalka soo jiidashada leh iyo midabka hodanka ah ee fescue.
Waa muhiim! Uma baahnid diyaarin gaar ah jiilaalka. Xitaa ma qarin kartid.
Warshad waxaa lagu faafiyaa by abuur, hababka seedling iyo qaybsan baadiyaha. Seeds waxaa lagu iibiyaa dukaamada ama laga soo ururiyey jiritaankooda dhamaadka xilliga ubax. Si fudud u carrada ciidda.
Waa ku filan kaliya inaad ku kala firdhiso abuurka goobta. Waxay naftooda ku qabtaan dhulka. Sidoo kale beero iyo geedo sanduuqyada. Wuxuu u baahan yahay waraabin badan iyo abuurista saameyn aqalka dhirta lagu koriyo iyadoo la adeegsanayo filimka. Tani waxay khusaysaa oo kaliya in geedo sanduuqyada.
Waxaa la dhigayaa meel qorrax leh oo qorrax leh, iyo muuqaalka ka dib markii caleemaha koowaad waxaa loo wareejiyaa mid qabow. Haddii caleemaha yar yar ay sameeyeen ugu yaraan laba caleemo, waxaa suurtogal ah in ay ku beeri dhirta dheryihii, iyo May - beerta.
Geedka dhoobada ah, oo magaciisu ka yimaado cutubka kelmadda, sababtoo ah xaqiiqda ah in uu leeyahay khafiif ah iyo talooyin fiiqan oo caleemo ah. Sare, ilaa saddex mitir, warshad qurux badan oo qoyan. Caleenta wuxuu ku urursan yahay salka. Faallooyinka leh ubax dumar ah waa mid cajiib leh, oo leh timo xiiran oo dheer, hoos u dhaco. Labaad. Muddada ubaxu - Agoosto - Oktoobar.
Warshad waxaa lagu gartaa daaqsinka iyo dhalmada. Laga soo bilaabo abuurka, geedo waa la koray. Isa saar iyaga Maarso - Abriil. Muuqaalka beeritaanka waa qaabka qallalan ee qallalan. Waxay lagama maarmaan u tahay abuurka si uu u bislaado.
Abuurka Reer ah waxaa lagu beeray ciidda bacaadka-peat ee sanduuqyada. Waxaa lagu kaydiyaa qol hawo leh heerkulka qolka. Caleemaha ugu horreeya waxay muuqdaan laba toddobaad kadib.
Laga soo bilaabo qeybtii labaad ee May, geedo lagu beeray karaa in dhul furan. Kaliya cortaderia weyn oo ka weyn shan sano jir ayaa ku jira ubaxyada. Iyada oo bilawga maalmood ee hargabka diiran oo qadhaadh ah, xoortay geedihii la beeray ka hor inta tan la beeray.
In daryeelka ee cortaderia aan qabyo ahayn. Dhamaanba waxay ku noolaan karaan meelaha bannaan ee carrada saboolka ah. Haddii ay ku yaraato roobka ugu yar aaggaaga, biyo qoyan labadii toddobaadba mar. Bacriminta iyo quudinta ciidda u dhow cortaderia u baahan tahay guga. Iyadoo imaanshada dayrta, si ay warshaduhu u badbaadaan jiilaalka si ka wanaagsan, waxaa lagula talinayaa in lagu xiro caws la saaro rucubood una riixo dhulka. Caleemaha Young daboolay caleemo qallalan.
Waa muhiim! Markaad qurxinayso sawirka, dhulka maxkamadda ku yaal.
Tufan qurux badan
Cawska yaryar ee quruxda badan (Graff cawska cawska) waa geedo ubax ah oo qoyska ka mid ah badarka. Waxay leedahay in ka badan saddex boqol nooc. Waxay kor ugu kacdaa hal mitir oo dherer ah waxayna leedahay dhuuban, dheer, caleemo cufan ah. Rikoodhka yaryar oo leh dherer aan ka badneyn toddobo mitir oo kor loo qaado ayaa lagu ururiyaa xagasha quruxda badan.
Lama yaabin in geedka uu magaciisu qurux badnaa. Inta lagu jiro xilliga ubaxa, xayawaanku waxay hoos ugu soo dhacaan dhulka, kor u kaca, waxayna u muuqataa in baalal boodh ayaa ku kala firirsan agagaarka cagaaran.
Si aad u korodho quruxda aan caadiga ahayn ee cawska, waxaad u baahan tahay inaad soo saartid miraha. Marka hore, geedo waxaa loo diyaariyey, kuwaas oo Gaga mid ah ilaa laba bilood. Marka sprouts ay xoog badan yihiin, waxaad ku beeri kartaa dhul furan (May - Juun). Waxa ugu wanaagsan ee cawska baaluqa waa qalalan oo ciidda qashinka ah. Haddii biyuhu dhulka ku dhajiyaan meel u dhow, waxaa lagu talinayaa in la daadiyo biyaha kahor intaadan beerin cawska cawska. Biyaha warshad kaliya ka hor inta uusan ufiirin.
Ma taqaanaa? Kovyl qurux badan oo ku qoran Buugga Cas ee Ukraine iyo Ruushka.
Ma u dulqaadan raasamaalka qoyaanka ee aagga asalka ah. Waxa kaliya ee uu u baahan yahay waa mid si joogto ah u jarjarida duurka. Xilliga jiilaalka, waxaa lagu talinayaa in la jaro caleemo qallalan iyo ubaxyo.
Noocyada waxay abuuraan wax lagu daro firiley
Mabda'a ugu muhiimsan ee qurxinta beerta - dhirta si habboon loo soo xulay. Taasi waa, hal meel ah oo keliya oo jecel qorraxda iyo qoyaan waa koraan, ee labaad - kaliya oo jecel of carrada dhoobo dhaadheer, saddexaad - sida in aysan u dulqaadin drafts, iwm
Waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in nooc kasta oo siriyaalka ah ee naqshadeynta muuqaalka ah waa in ay ahaato mid isku mid ah noociisa iyo inta kale ee dhirta. Tusaale ahaan, firileyda hooseeysa waxay si fiican u dhejisaa sariiraha ubaxa, ku haboon jidadka qurxinta, si loo abuuro walxaha beerta dhagaxa leh. Iyada oo doorka noocan oo kale ah ayaa ah midka ugu fiican ee la xalin karo fescue. Ku beeran meelaha waaweyn, furan. Dalagyada dalagga dheeraadka ah waxay u adeegi doonaan daaqsinka cagaaran. Waxay u qaybin karaan aagga goobo.
Ku habboon asal ahaan. Inta badan wakiilada noocyada noocaan ah ayaa aad u jecel ciidda qoyan. Sidaa darteed, haddii ay jirto kaydka boodhka beerta, waxaad xor u noqotaa inaad abuurto nacas khuseeya oo ku wareegsan, shaggy ama pennettetum cawl.
Markaad ka shaqeyneyso naqshada muuqaalka, xusuuso in dhammaan firilayda aysan jeclayn inay koraan korantada. Dad badan ayaa weli si firfircoon u koraya, xagjirnimada isla wakhtiga kale, dhaqamada oo daciif ah. Если территория небольшая, украсьте ее овсяницей или овсцом. Стильные аккуратные кустики оживят ваш сад.
Даже выходцы из жарких стран нормально растут в наших широтах. Dhammaan waxyaalaha loo baahan yahay waa inay daboolaan xilliga qaboobaha, cawska ka soo baxa, iyo guga si loo yareeyo qoryaha dhintay.